Kuongorora kamera paShabbat - Rabbi Michael Avraham
Iwe unofunga kuti zvinorambidzwa here kupfuura pamberi pekamera inotevera traffic neMugovera, kana pamberi pemwenje unovhenekerwa ne traffic, uchifunga kuti ini handina chido chekubatidza tochi kana kubatidza kamera.
mikyab Vashandi Akapindura 6 years ago
Sekuziva kwangu hapana chinorambidzwa pane izvi. Uye vazhinji vakatobata nazvo (semuenzaniso muShevet Halevi responsa uye nezvimwe). Ona semuenzaniso pano:
Uriel Akapindura makore 6 apfuura
Mubvunzo muchirevo chimwe chete..
Zvakadini nekuenda pamusoro pevhoriyamu detector yealarm system kana system yadzimwa?
System off = detector inoshanda uye chenjedzo asi sisitimu haizonzwika alarm sezvo iri mustandby mode. Iyo detector haina waya uye inogona chete kutumira pasina mukana wekupinza, saka haigone kudzimwa kuburikidza nehurongwa asi nekubvisa bhatiri chete.
Michi Vashandi	Akapindura makore 6 apfuura
Chii chakasiyana? zvakafanana nepamusoro.
Uriel Akapindura makore 5 apfuura
Izvi zvinoreva kuti detector inoshanda uye inotumira pese paunopfuura, asi iyo alarm system haipindure kune transmitter.
Iyo detector yakaiswa mumba mangu uye ini ndinogona pamutemo pamberi peMugovera wega wega kuvhara ma detectors / kubvisa bhatiri.
Musiyano chete ndewekuti ndine sarudzo yekugadzirisa dambudziko. Mubvunzo ndewokuti dambudziko iri rinodiwa here.
Michi Vashandi	Akapindura makore 5 apfuura
Kana detector ikamuka asi isingatapurire chero chinhu handioni chikonzero chekunetseka. Mukuona kwangu hapana chinorambidzwa pane izvi. Rabbi Rabinowitz vakavandudza kuti kana iwe usingaone zvakananga mhedzisiro yechiito hazvirambidzwe (nekadhi rinovhura gonhi rehotera paShabbat), uye ndipo kana paine mhedzisiro (gonhi rinovhurika) asi usingaone mhedzisiro yekutamisa. kadhi. Ichi chitsva chandisina chokwadi chekuti ndinobvumirana nacho. Asi pano hapana mhedzisiro zvachose (uye kwete chete kusazviona) saka ini handioni chikonzero chekuwedzera.
Moshe Akapindura makore 5 apfuura
Ndinofunga kuti unofanira kubatidza detector chete mazuva aunenge usipo pamba. Zviri pachena kuti kwete?